DRC: တနင်္လာနေ့သြဂုတ်လ52019 ၏စာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အာဖရိကဖိထားပါ "DRC: တနင်္လာနေ့သြဂုတ်လ52019 ၏စာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက
DRC: တနင်္လာနေ့သြဂုတ်လ52019 ၏စာနယ်ဇင်းပြန်လည်သုံးသပ် - အာဖရိက
- သတင်းစာများအားဖြင့် run အဆိုပါအကြောင်းအရာများအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးအောက်မှာဝန်ကြီးချုပ် Sylvestre Ilunga Ilunkamba ကဆောငျရှကျညှိနှိုင်း gravitate ကင်ရှာဆာအတွက်တနင်္လာနေ့ထင်ရှား။ ,
"အစိုးရ: Ilunga Ilunkamba တိုင်ပင်ဆွေးနွေး! "။ ဤသည်က၎င်း၏ပေးပို့တနင်္လာနေ့အတွက် AS ဖိုရမ် DES ဟာအားဖြင့်ပြသခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ 11ème Limete ဝန်ကြီးချုပ် Sylvestre Ilunkamba Ilunga ကြောင်းသတင်းပေးပို့လမ်းပေါ်မှာ၏သတင်းစာ, သူ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေ, သူနိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ခုမှအကြီးတန်းအရာရှိများနှင့်ကုန်သွယ်။ အမည်ရ Kamerhe, ဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုတပ်ဖွဲ့များနှင့်မဟာမိတ်များ၏အုပ်စုဖွဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ (AFDC-တစ်ဦး) ၏ကွန်ဂို Nation (UNC မှ) နှင့်ဟဲဗီးဝိတ် cache နှင့်ကျိုးနွံ Bahati "တပ်မှူး" အတှကျပါတီပြည်ထောင်စုကငျြ့ဝတျအခွင့်အာဏာ။ ဒါဟာတူညီတဲ့စနေနေ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အကြောင်းကြားတစ်ဦးမိတ္တူဖိုရမ် des အမျှ၏မူကြမ်းရေးဆွဲရောက်ရှိရာဖြစ်တယ်။
အဆိုပါကြေညာချက်အရ, AFDC-တစ်ဦး၏ကိုယ်ကျင့်တရားအခွင့်အာဏာဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ရုံးမှာအထံတော်တစ်ဦးယဉ်ကျေးခရီးစဉ်၏မူဘောင်အတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ "ဟုအဆိုပါအစိုးရဖွဲ့စည်းရေးအပေါ်ညှိနှိုင်းဖို့မဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းမရှိရင်။ "
တူညီသောသွေးကြောများတွင်သာယာဝပြောတဲ့အချိန်အတန်ကြာအဘို့, ဝန်ကြီးချုပ်လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အပြုအမူများအတွက်လိုအပ်သောအပေါငျးတို့သဖြစ်ရပ်မှန်များကိုတက်စိမ်ဖို့စစ်ဆေးရေးလာရောက်လည်ပတ်သူတစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်ရစ်သမ်နီးကပ်အတွက်ရုပ်ပြကြောင်းမှတ်ချက်ပြု အစိုးရ, နှင့်သူ့အစိုးရ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနိုင်ငံရေးကြားနာအလားအလာများ၏မြှောက်။
ဤသည်စနေနေ့သြဂုတ်လ32019, Sylvestre Ilunga Ilunkamba Kamerhe နှင့်အတူဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးအရာရှိတွေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းနှင့်အရေးပေါ်အလုပ်မိန့်မြွက်တော်မူ၏။ Sylvestre Ilunga ၏အိမ်ရှင်အာဏာရညွန့်ပေါင်းနိုင်ငံရေး Group ၏အဖွဲ့ဝင်သူ့အစိုးရဖွဲ့စည်းများ၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိပြီးသူဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်, အမည်စာရင်းတင်သွင်းဖို့အလုပ်လုပ်နေကြကြောင်းအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။
နာဂဒီတကယ် DRC နိုင်ငံရေးလူတန်းစားလမ်းညွှန်သောယေဘုယျစိတ်ဝင်စားမှုလျှင်ယုတ္တိနည်း, ဤညှိနှိုင်းအချိန်မဖြစ်သင့်ကြောင်းအလေးပေး "ဒီဝန်ကြီးချုပ်ကဆွေးနွေးညှိနှိုင်း accelerates": ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ။ ဤရွေ့ကား, အထူးသဖြင့်ပြည်နယ်များ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဖြစ်ပျင်းရိပုံရသည်။ ဒါဟာအစိုးရကကွန်ဂို၏များစွာသောပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှဖွဲ့စည်းကြောင်းအရေးပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ အကြီးအအပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်လုပ်နေပါတယ်သူကျောင်းကတစ်နှစ်, အဆိုးဝါးဆုံးများထဲတွင်။
လက်ျာဘက် "4 ဝန်ကြီးဌာနများ '' သတင်းအချက်အလက် Africanews" Bahati တောင်းဆိုနေပြီ "။ အမှန်စင်စစ် AFDC-တစ်ဦး၏ဦးခေါင်းသည်၎င်း၏မူဝါဒအားပလက်ဖောင်းမှရရှိရန်အတွက်ခွဲတမ်းဖြန့်ချိဖို့ဝန်ကြီးချုပ်တောင်းဆို။ တစ်ဦးဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်, ပြည်နယ်ဝန်ကြီးဌာနနှင့်တစ်ဦးဒုဓမ်မအမှုတစ်ခုဝန်ကြီး: တစ်စာတွင်ဇူလိုင်လ 30 2019 အပေါ်သူ့ကိုမှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, သူဌေးက AFDC-တစ်ဦးက "ညာဘက်" လေးရာထူးခေါ်ဆိုသည်။
"ခွဲတမ်းများ၏ကနဦးခွဲဝေကိုလည်းအဆုံးစွန်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မပြုမီ AFDC-တစ်ဦး၏နိုင်ငံရေးအလေးချိန်ပေးသောကြောင့်ဒီခွဲတမ်းပါလီမန်အများစုအတွင်း FCC သည်၏ခြုံငုံခွဲတမ်းကနေနုတ်ယူသည်" ဤအတွက်ကျိုးနွံ Bahati ကပြောပါတယ် စာပေးစာယူ။ သူကဆက်ပြီး "ကျနော်တို့ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်မကြာသေးမီကအထိညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့သောကျွန်တော်တို့ ins နှင့်တနေရာကိုသိရအထူးသဖြင့်သောကြောင့်အခွင့်အရေးများတောင်းဆိုခွင့်ရှိသည်။ "
လေ့လာသူများကယုံကြည်ဖို့ "ဟု The cache ပြည်ထဲရေး, နိုင်ငံခြားရေး, စီးပွားရေးနှင့်ဘတ်ဂျက်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ " အစ်ကိုကြီးဆိုတဲ့မေးခွန်းကို cache အချို့အချုပ်အခြာအာဏာဝန်ကြီးဌာနများရနိုငျမလားဆိုတာခဲ့တာကပြောပါတယ်။
အဖြေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ညှိနှိုင်းမှု၏အရှည်အနည်းဆုံးပြည်ထဲရေး၏ Tshisekedi Kamerhe-ဆင်းသက်ရာထူး၏လှုပျရှားမှု, စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနခွင့်ပြုခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစဘတ်ဂျက်န်ကြီးဌာနဖွင့်ယူလိုက်တယ်။
အလားအလာ "ဟုအဆိုပါ FCC နှင့် Cache ၏ချုပ်ကိုင်အတွက် Ilunga Ilunkamba" မြင်သည်။ ရှည်လျားမုန်တိုင်းထန် ups ပြီးနောက်ကြီးစွာသောစစ်တိုက်ယခုဝန်ကြီးပို့စ်များကိုကျင်းပရန်ဌနာစရိုက်ဝန်းကျင်ကစားခြင်း။
Sylvestre Ilunga Ilunkamba, ထိုတွဲဖက် Kabila-Tshisekedi အားဖြင့်ကျင်းပလျက်ရှိနှမ်းဖယ်ထုတ်လိုက်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု။ အရာအားလုံး Kempinski ကွန်ဂိုမြစ်မှာဇူလိုင်လ 29 2019 ၏သဘောတူညီချက်အတွက်ရေးဆွဲအဖြစ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်ချိန်းချက်သောဝန်ကြီးချုပ်ကသူ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၏ရှေးခယျြမှုကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပုံကိုရှင်းလင်းဖြစ်ပါသည်, အလားအလာရေးသားခဲ့သည်။
ညီအစျကိုအဘို့, ယင်း၏အတိုင်းအတာ Ilunga Ilunkamba သူ့ဟာသူနှစ်ခုခေါင်းစီးသတင်း FCC သည်-Cache ညွန့်ပေါင်း, အမည်ရသည်ယောသပ် Kabila ကအပေါ်ချမှတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်းလူတို့နှင့်အတူအလုပ်မလုပ်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်းရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျဉ်းမြောင်းဖြစ်ပါသည် နှင့်ဖဲ Tshisekedi ။
DRC: ဒေသခံစာနယ်ဇင်းများ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ဒီစနေနေ့သြဂုတ်လ32019 - အာဖရိက